GMDQ oo ka qayb galay madasha kalfadhigii 17aad ee arrimaha doorashooyiinka caalamka – GMDQ
GMDQ oo ka qayb galay madasha kalfadhigii 17aad ee arrimaha doorashooyiinka caalamka
Xubin ka mid ah GMDQ marwo Khadija Osoble ayaa ka qayb gashay KULANKA ARRIMAHA DOORASHOOYINKA CAALAMKA looga hadlaayay, kaasoo lagu qabtay magalada ACCRA ee Ghana. Hadafka kulanka ayaa ahaa isu keenidda Guddiyadda Doorashooyiinka caalamka si ay isaga xog wareystaan waayo aragnimada la xirriirta teknoolijiyada loo isticmaalo qabashada doorashooyiinka. Kulanka waxaa sidoo kale ka qeyb-galay iibiyayaasha agabka tiknoolojiyada doorashooyinka si ay xog dhameystiran uga helaan wufuudda Guddiyada doorashooyinka meteleysay ee ka kala timid caalamka. Madasha ayaa sidoo kale abuurtay fursad ay isku bartaan guddiyada iyo shirkadaha iibiya qalabka tiknoolojiyada doorashooyinka.
Waxa laga wada hadlay in ay muhiim tahay in guddiyadu ka faa’iideystaan tiknoolojiyada iyada oo sidoo kalana dhaqaalaha iyo miisaaniyadda la tashiilaayo. Ka qeyb-galayaasha ayaa sidoo kale isku baraarujiyay in gudiyadu dhisaan kalsoonida dhammaan daneeyayaashu ku qabaan hannaanka doorashada maadaama tiknoolojiyo keli aysan dhalin karin aaminaad iyada keli ahna aysan xal u noqoneyn dhibaatooyinka iyo arrimaha ka dhasha doorashooyinka.
Kalfadhiga ayaa lagu soo gabagabeeyay abaalmarino caalami ah oo la gudoonsiiyey shaqsiyaad ka socday Guddiyo ku guuleystay in ay doorasho xor iyo xalaal ah ka qabtaan wadamo ay ka jireen caqabado waaweyn.
Waxaa la faafiyey January 31, 2019 February 2, 2019